Indoda Ngaba uThixo ukuba abe — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Le ndoda uThixo ngenxa ubuncwane bakhe zonke izinto One. ubuncwane abaninzi oqhelekileyo wokhanyelwa naye, okanye ukuba akuvumelekanga ukuba nazo, nokonwabela kwabo kuya ukuze wobulali ukuba baya kuze kuba yimfuneko ukuba ulonwabo lwakhe. Okanye ukuba kufuneka kubabona aye, omnye emva komnye, uya kungangenkankulu uziva ilahleko, ngokuba uMthombo yezinto zonke anayo One zonke ulwaneliseko, konke ukuthanda, konke endikunanzileyo. Nantoni unokuyeka okunene ethe yalahleka nto, kuba ngoku bonke oko One, yaye liye kuphela, ngokusemthethweni ngonaphakade.
A.W. Tozer, Ukusukela kaThixo
kelleyR • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:04 mna • impendulo